60 mfm munamato manongedzo anopesana nemweya wekusabereka | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 60 mfm minamato inongedza inopesana nemweya wekubereka
60 mfm minamato inongedza inopesana nemweya wekubereka
Kusabereka haisi chikamu chako. Ekisodho 23:25 inotaura sekuti sekuti mushandi waMwari kushaya mbereko hakugone kuve chikamu chako. Kusabereka idambudziko radhiabhori uye rinogona kungogadziriswa pane chinamato chemunamato. Isu takanyora makumi matanhatu mfm munamato ekupokana na mweya wekubereka. Iyi minamato yemunamato yakafuridzirwa naDr Olukoya wegomo remoto uye hushumiri hwezvishamiso. Iwo mweya wekusabereka ndewechokwadi, ivo vanonzi midzimu midzimu. Ivo vane mhando dzemarudzi ese ekusava nezvibereko, kusanganisira kusabereka chibereko. Unofanira kusimuka unamate idzi mfm munamato manzwi Kuti uzvinunure pachako kubva kumweya yakaipa iyi.
Namata iyi minamato uchitenda, uve anotarisira uye Mwari wekubereka achakushanyira nhasi muzita raJesu. Mwari vakashanyira Sarah, vakashanyira elizabeth, Haana kuchinja, Achakufambirawo nhasi. Akati nekuda kwekunyadziswa kwako uchave nekaviri. Tarisira mapatya ako, matatu, quadruplets uye nezvimwe paunenge uchidurura mwoyo wako kuna ishe. Idzi mfm munamato manongedzo anopesana nemweya wekushaya mbereko unokupa simba kuti urwe muhondo yemweya. Ndiri kukuona uchigovera ufakazi hwako nhasi muzita raJesu.
80 mfm minamato inonongedza inopesana nemweya wekubereka.
1. Baba, ndinokutendai nekundinunura kubva pamhando dzose dzeuranda.
2. Baba vangu, neropa reMwanakomana wako Jesu ndishambidzei zvivi zvese muhupenyu hwangu, kusanganisira wezvematadzo muzita raJesu.
3. Baba vangu, ngoni dzenyu ngadzikunde pakutonga kwese muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
4. Oh Lord, ndiregerere kubva kune chero chitadzo chinotambudza muhupenyu hwangu munaJesu zita ..
5. Oh Mwari, nesimba riri muzita rajesu, ndipatsanure kubva kuzvitadzo zvese zvababa vangu muzita raJesu.
6. Ndinosiya chero kuzvitsaurira kwakaipa uye zvirevo zvaSatani zvakaiswa pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
7. Ini ndinotyora kutongwa kwese kwakaipa nekugadzwa nemadhimoni, pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
8. Ini ndinorega uye ndinosunungura kubva kuzvinhu zvakashata zvese zvekuzvarwa kwangu kuya kun'anga yakabatanidzwa muzita raJesu.
9. Ini ndinoraira atari yese yakaipa ichitaura vachipesana nekubereka kwangu kupaza nemoto ikozvino muzita raJesu Kristu.
10.Ndinotora masimba pamusoro pemasimba ese aSatani anorwa nekuzvarwa kwangu muzita raJesu.
11.Ruoko, dzima zvirevo zvakaipa pamusoro pekubereka kwangu muzita raJesu.
12.Ndinotora simba pamusoro pekutuka kese kubva nekuda kwekutyora mhiko dzakaitwa nemadzitateguru angu izvo zvava kuita kukanganisa chibereko changu muzita raJesu.
13. Ini ndinoraira madhimoni ese anopindirana nechero yakaputsika yakaipa yevabereki nekuzvipira kuti ibve kwandiri ikozvino, muzita raJesu.
14. Ah Gkd, ndinozvinyudza kubva kuzvitadzo zvemadzitateguru angu neropa rinokosha raJesu.
15. Ini ndinozvitsaura kubva pakutuka kwese kubva kumadzitateguru angu muzita raJesu.
16.Ndinoraira kuti kutukwa kwekusabereka kuitwe, muzita raJesu.
17. Nekutsamwa kweiyo holyspirit pane hupenyu hwangu, ndinotyora joko rega rekutuka kwekushaya mbereko mumhuri yangu muzita raJesu.
18. Ini ndinoraira chero dhimoni rinotambudza chibereko changu kana kukonzera kusagadzikana muhupenyu hwangu kubuda kamwechete, muzita raJesu.
19. Jesu muporesi wangu, poresa kukuvadza kwese kwakaitwa kumuviri wangu nemitezo yekubereka muzita raJesu.
20. Ini ndinobvisa uye ndinobvisa kubva mumwoyo mangu mifungo yose, mufananidzo kana mufananidzo wekusabereka muzita raJesu.
21. Ini ndinoramba mweya yega yega yekusahadzika, kutya uye kushungurudzika, muzita raJesu.
22.Ndinorega kusanonoka kese kusada kunonoka kune humbowo hwezviratidzo zvangu, muzita raJesu.
23.Ati ngirozi dzaMwari mupenyu dzikungurutse dombo rega rega rekutadzisa kuratidzwa kwekubuda kwangu, muzita raJesu.
24.O Ishe, kurumidzai izwi renyu kuti muite muwanano muzita raJesu.
25.O Ishe, kurumidzai kunditsiva kunevadzivisi vangu muzita raJesu.
Ini ndinoramba kubvumirana nevavengi vekubereka kwangu, muzita raJesu.
27. O Ishe ndinoshuvira mabvisiro munzvimbo inobereka chibereko changu muzita raJesu.
28. O Ishe, ini ndinoshuva kutora pamuviri vhiki rino, muzita raJesu.
29. O Ishe, ndinoshuvira kuti kubata kwangu kwechishamiso kusimbiswe nanachiremba mwedzi uno, muzita raJesu.
30. O Ishe, ndinoshuva kutakura matatu matatu matatu, muzita raJesu.
31. Ngakuve nekusagadzikana, kurongedzwa patsva, kudzokororwazve, uye kugadziriswazve 'kwemamiriro ezvinhu nemamiriro ezvinhu kuitira kuti ndipe mukana wekuratidzwa kwezvishamiso zvandinoda, muzita raJesu.
32. Rega rwodzi rwese muhupenyu hwangu rwakaita kuti vavengi vatambure rwunonzi rwuri pedyo muzita raJesu.
33. Ini ndinotaura kuti yega yega dhimoni inoongorora zamu rangu nepamuviri, ndinovaraira kuti vaende nebofu nemoto muzita raJesu.
34. Mwari waEria anopindura nemoto, ndipindure nemoto, muzita raJesu.
35. Mwari vakapindura Mozisi nekukurumidza pagungwa Dzvuku, ndipindure nemoto, muzita raJesu.
36. Iye Mwari akachinja mujenya waJabez, ndipindure nemoto, muzita raJesu.
37. Mwari anoraramisa uye anodana izvo zvinhu zvisingaite senge zviripo, ndipindure nemoto nhasi muzita raJesu.
38. Rega nzvimbo yehupenyu hwangu ipise zvakanyanya kuti chero chakaipa chigare, muzita raJesu.
39. Iwe wakashata kukura kwe fibroid mumuviri wangu kusimudzwa uye kubviswa mumuviri wangu muzita raJesu.
40. Rega muviri wangu urambe huipi hwese hwakaipa hwekuzvibata uye STD mumuviri wangu muzita raJesu.
41. O Ishe, ini ndinoparidza kuti kutambudzika kwese kweanoperera sperm count kwapera manje muzita raJesu.
42. Ini ndinoramba manomano ese evanyengeri, nemuzita raJesu.
43. Ini ndinotyora masimba emashiripiti, uroyi uye nemweya inozivikanwa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
44. Chero satanic amana mudumbu mangu arikuvharira chibereko changu anobva adhonzwa neropa raJesu.Ndinosunungura nekuaburitsa, muzita raJesu.
45. Ini ndinoburitsa uye ndinopfuudza chero dhiabhori satanic mu nhengo dzangu dzekubereka, muzita raJesu.
47. Ini ndinoburitsa uye ndinopfuudza chero dhiabhori satanic mudumbu rangu, muzita raJesu.
48 .. MuZita raJesu, Ndinoparidza Pamberi Pemauto Ese erima, ”ndichaendesa vacheche vangu vese (taura huwandu) uye magedhi egehena anenge asina simba rekundimisa” muzita raJesu.
49. Iwe ruoko rwekunze wakaiswa padumbu rangu, ndisunungure nemoto izvozvi !!! muzita raJesu
50 .. Muzita raJesu, ini ndinoramba, ndinoputsa uye ndinosunungura kubva kumweya yese varume vadzimu vadzimu vakadzi muzita raJesu.
51. Baba, ita chishamiso chekusika mumuviri wangu nhasi, dzvitsa chero nhengo yakakuvara mumuviri wangu nenhau dziya muzita raJesu.
52. Baba ndinunureiwo kubva kusingaperi kusabatiswa kwehutachiona hwehutachiona muzita raJesu.
53. Baba, ndiporese kubva mukukuvara kese nekuda kwemimba muzita raJesu.
54. Baba gezai chibereko changu neropa renyu muzita raJesu
56. Baba yaive yangu fallopian machubhu neropa rako muzita raJesu.
57. Wese muvengi wangu ari shure kwechibereko changu abudiswe pachena uye anyadziswe pachena muzita raJesu.
58. Baba sezvandaenda kunopa mwana zita revanhu vazhinji, vanhu ngavaunganidze mumba mangu nhasi kuti mwana wangu atumidze zita raJesu.
59. O Ishe, pindurai vanondiseka, nekundipa vana vangu chairo kukudzwa kwezita renyu muzita raJesu.
60. Baba ndinokutendai nekupindura minamato yangu muzita raJesu.
Previous nyaya40 Mfm minamato mapoinzi Ekukura kweMweya
inotevera40 mfm munamato mapoinzi ekushomeka kwemari
Camelyne Okinda Nyamavhuvhu 29, 2020 Na 1:37 pm
Ndatenda Mwari nemunamato pamusoro ndatenda ndanamata uye ndicharamba ndichinamata kusvikira Mwari vaita chimwe chinhu kudumbu rangu, mumwe munhu akapika kuti kwatiri tigoziva kunze kwekunge afa uye nemashoko ake Mwari ngaamunyadzise
Minamato Pamusoro po Kuona Moto MuRoto